5 Tusaalaynta Daabacaadda Dijital ah Waa Inuu Fiiriyaa | Martech Zone
Wednesday, September 19, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan tijaabinay macmiilkayaga, Zmags, macaamiisha qaarkood iyo daawadayaashooda ayaa aad u qabow. Waxaan doonayay inaan tuso tusaalooyin ka mid ah, waxa aan aaminsanahay, waa qaar ka mid ah codsiyada dhijitaalka ah ee is-dhexgalka leh! Si aad u furto daawadayaasha, kaliya dhagsii shaashadda daawadayaasha!
Macaamiisha wax soo saarka Zmags Commerce Pro waxay arkayaan natiijooyin cajaa'ib leh, oo ay ku jiraan a 5x kordhin ee aragtida bogga, 2x waqti qaatay goobta, ilaa a 2x wiish ee heerarka beddelashada iyo a 55% koror celceliska qiimaha dalabka!
Calaamadda CVS - fiidiyow, bogag is dhexgal ah display muuqaal dhalaalaya!
Baakadaha Gudaha - dhinaca midig waxaa ku yaal dhammaan daabicadihii hore!
Cuntada Maanta iyo Nafaqada - ku guuleystaha abaalmarinta DMA Digital Magazine Awards, joornaalkan dijitaalka ah ee is dhexgalka ah waa inuu arko… oo leh xayeysiisyo is-dhexgal ah iyo fiidiyowyo gundhig ah
Majaladda Cell C - adeegsi aad u gaar ah oo ah xayeysiisyada is-dhexgalka dhijitaalka ah. Kafiiri Just for Boys, Kaliya Gabdhaha xulashada bogga 10!
Tafaariiqleyda qaar ayaa si toos ah ugu adeegsanaya daabacaada dhijitaalka ah degelkooda! Fiiri Dick's Sporting Goods 'Lookbook… oo si buuxda loogu dhex daray nidaamkooda e-commerce, daawadaha wuxuu soo bandhigayaa muuqaalo is dhexgal ah. Guji calaamadda + waxaadna si toos ah ugu dari kartaa sheyga gaarigaaga wax lagu gado!
Muuqaal kale oo cajiib ah oo ka mid ah Zmags ayaa ah inaad ku dhejin karto lambarkaaga Google Analytics UA isla markaana dhab ahaantii cabbiri karto adeegsiga iyo isdhexgalka daabacaaddaada dhijitaalka ah.
Tags: joornaalka dijitaalka ahdaabacaadda dhijitaalka ahmadal daabacaadda digitalmajaladda is dhexgalkaganacsiga joornaalkajoornaalka ecommerce